Tafakatra 214 ireo matin’ny valanaretina: iray lavon’ny covid-19, enina ny tranga vaovao eto Analamanga - ewa.mg
News - Tafakatra 214 ireo matin’ny valanaretina: iray lavon’ny covid-19, enina ny tranga vaovao eto Analamanga
Midina hatrany. Miisa 34 ireo
tranga vaovao mitondra ny tsimokaretina covid-19, omaly tamin’ny
fitiliana miisa 552 natao, araka ny tatitry ny CCO. Avy eto
Analamanga ny enina amin’izany raha 11 ny any Alaotra Mangoro. Valo
kosa ny any Diana raha telo ny any Sava.
Mbola niverenany indray ny
Niverenany indray kosa ny any
Itasy, ahitana tranga roa raha efa tsy nisy narary intsony tany
an-toerana fa sitrana avokoa. Roa tahaka izany ny any Vatovavy
Fitovinany raha iray avy ny any Matsiatra Ambony ary telo ny any
Etsy an-daniny, iray lavon’ny
covid-19 ka avy any Amparafaravola izany.
Olona faharoa maty tany
Olona faharoa matin’ny valanaretina
tato anatin’ny herinandro, tany amin’ity distrika any Alaotra
Mangoro ity izy io. Tafakatra 214 izany izao ireo nodimandry noho
ny coronavirus eto amintsika, hatramin’ny 19 marsa no ho
Na izany aza, miisa 41 ireo sitrana
ka anisan’ny maro tamin’izany ny tany Menabe, miisa 12 sy ireo 10
tany Alaotra Mangoro. Tafakatra 14 452 izany izao ireo
nahafeno ny fepetra ho amin’ny fahasitranana tamin’ireo mitondra ny
tsimokaretina, miisa 15 803. Nidina ary nihena ho 1 135
kosa ireo mbola tsaboina sy arahi-maso ny toe-pahasalamany. Miisa
29 kosa ireo marary anaty fahasarotana “forme grave”, amin’izao
L’article Tafakatra 214 ireo matin’ny valanaretina: iray lavon’ny covid-19, enina ny tranga vaovao eto Analamanga a été récupéré chez Newsmada.
Coronavirus: nisotro ilay tambavy i Nicolas Dupuis
Tsy diso anjara fa anisan’ireo olona nisotro ilay tambavy “covid organics”, ihany koa i Nicolas Dupuis, mpanazatra ny Barea de Madagascar. Ny alarobia lasa teo izy no nisotro ny anjarany. Nambarany fa miaro ny tenany amin’ny valanaretina coronavirus ny tenany ka izany ny antony hisotroany ilay tambavy vitan’ny Imra. Nampirisika ireo mpilalao sy ny Malagasy ihany koa i Nicolas Dupuis, hisotro izany tambavy izany.Ankoatra izay, mbola nanentana ny rehetra ihany koa ny tenany hanaja ireo fepetra rehetra navoakan’ny fitondram-panjakana, hiadiana ny tsy hiparitahan’ity valanaretina ity. Anisan’ireny, ny tokony hijanonana ao an-trano, ny fanasana tanana matetika ary ny tsy maintsy hitondrana arovava, rehefa mivoaka ny trano ary tokony hanaja hatrany elanelana 1 metatra. Nankahery ny rehetra ny tenany mba hanao fanatanjahantena rehefa mijanona ao an-trano fa anisan’ny fiadiana mahomby amin’ity valanaretina coronavirus ity izany.Tompondaka L’article Coronavirus: nisotro ilay tambavy i Nicolas Dupuis a été récupéré chez Newsmada.
Fivadihana fiara :: Mpianatra iray namoy ny ainy, enina ambin’ny folo naratra
Niharam-boina tany amin’ny lalam-pirenena fahasivy tany Toliara ny andiana mpianatra avy amin’ny oniversiten’i Toliara, afak’omaly hariva. Nivadika ny fiara nitondra azy ireo. Tovovavy mpianatra iray, roa amby roapolo taona no namoy ny ainy. Mpianatra enina ambin’ny folo kosa no naratra niaraka amin’ny mpamily. Ity farany izay tsy maintsy hatao famotorana tamin’io loza io. Avy nitsangantsangana ireto andiana mpianatra sady mpikambana ao amina fikambanana iray any Toliara ireto. Nandeha tamin’ny lalam-pirenena fahasivy izy ireo no tra-doza teo amin’ny telo ambin’ny folo kilaometatra tsy hahatongavana ao an-tampon-tanànan’i Toliara. «Mamo ny mpamily. Nentiny nandeha mafy ny fiara ka nivadika tany an-tsisin-dalana. Ambenana mafy eny amin’ny hopitaly ilay mpamily maratra, eo am-piandrasana ny fotoana hahafahany mivoaka hatao famotorana», hoy ny zandary any Toliara. Namoy ny ainy teny amin’ny hopitaly ilay tovovavy, roa amby roapolo taona. Mbola manaraka fitsaboana kosa ireo naratra. L’article Fivadihana fiara :: Mpianatra iray namoy ny ainy, enina ambin’ny folo naratra est apparu en premier sur AoRaha.
Rugby vehivavy – «Africa women’s cup»: nomontsanin’i Kenya ny Makis de Madagascar
Ratsy fanomboka ny Makis de Madagascar, teo amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika, taranja rugby lalaovina olona 15, sokajy vehivavy na ny “Africa women’s cup 2019”. Fihaonana notanterahina, tany amin’ny kianja Johannesbourg, nanomboka omaly zoma. Avy hatrany mantsy, nomontsanin’i Kenya, tamin’ny isa mavesatra, 35 no ho 5, ny Malagasy, tamin’io.Nanokatra ny isa voalohany anefa ny Makis, tamin’ny alalan’ny baolina nentin-tanana, teo amin’ny minitra faha-15, saingy tsy voatsara izany ka nijanona ho isa 5 ihany. Nifandanja tanteraka ny fihaonana avy eo ary nahavita nanohitra ry Sophie sy ry Tiana ary i Tantely. Nanomboka nampiasa ny halehiben’ny vatany tamin’izay ny Kenyanina, sady nihazakazaka ihany koa. Nahatonga baolina nentin-tanana ihany koa izy ireo, teo amin’ny minitra faha-18, saingy tsy voatsara izany ka sahala, 5 no ho 5, ny isa.Tsy nijanona teo izany fa nisesy ny fanafihan’izy ireo ka vetivety foana, nahatsindry baolina roa indray ny Kenyanina izay samy tsy nisy voatsara ka 15 no ho 5 ny nentin’ny roa tonta niala sasatra.Notsindrin’ny Kenyanina tanteraka ny Makis, teo amin’ny tapa-potoana faharoa, ka zara raha nahatafavoaka baolina. Nanao totoafo ny fanafihan-dry zareo ka nisesy ny baolina voatsindry, izay tsy nifarana raha tsy 35. I Afrika Atsimo, nanintsana an’i Ogandà, tamin’ny isa mavesatra, 89 no ho 5, no hidona amin’ny Makis, ny talata 13 aogositra ho avy izao. TompondakaL’article Rugby vehivavy – «Africa women’s cup»: nomontsanin’i Kenya ny Makis de Madagascar a été récupéré chez Newsmada.
“Hapetraka amin’ny toerany maha Renivohitra ara-toekarena azy ny kaominina Toamasina. Efa manomboka ny asa ka anisan’ny voalohany amin’izany ny fanomezana karama tsy tapaka ny mpiasa ary efa mampihatra karama farany ambany, 200 000 Ar, nambaran’ny filoham-pirenena ny kaominina izao. Efa tsy misy fako mivangongo intsony eny rehetra eny. Vita tototra arin-tany ireo faritra iva hisorohana ny fiangonan-drano eny rehetra eny“, hoy ny PDS mitantana ny ao Toamasina, Razafimanana Jean Christin, nitafa tamin’ny mpanao gazety, omaly. Nanteriny fa hanatratra ny veliranon’ny filoham-pirenena Rajoelina ny antony nanendrena azy ho filohan’ny delegasiona manokana. Nohamafisiny fa tsy maintsy hiezaka hanala ny gaboraraka nataon’ny teo aloha ny ekipa amin’ izao fotoana izao. “Hametraka fanovana eo amin’ny fitantanan-draharaham-panjakana ny nifidianana ny filoham-pirenena ka hanatrarana ny veliranony eto Toamasina… », hoy ihany izy.Nambarany koa fa hatao tsena filamatra, taorian’ny fahamaizan’ny etsy amin’ny Bazary kely ary ho rakofana takamoa ny andrin-jiro rehetra eto an-drenivohitr’i Toamasina.SajoL’article PDS, Razafimanana Jean Christin: “Hametraka ny fanovana isika…” a été récupéré chez Newsmada.
Fanirisoa Ernaivo : Hanohana ny kandidà Marc Ravalomanana
Mihazakazaka ny fotoana. Fantatra fa manomboka ny 4 desambra izao, ary haharitra 15 andro ny fampielezan-kevitry ny fihodinana faharoa amin’ny fifidianana Filoham-pirenena. Hifanandrina amin’izany « 2è Tour » izany ny kandidà laharana faha-25, Marc Ravalomanana, sy ny kandidà laharana faha-13, Andry Rajoelina. Araka izany, mihazakazaka ihany koa ny fanohanana ny kandidà laharana faha-25 amin’izao fotoana izao. Anisan’ny nanambara ôfisialy izany fanohanana an’i Marc Ravalomanana, na Dada izany i Fanirisoa Ernaivo, izay anisan’ireo kandidà mpifaninana tamin’ny fihodinana voalohany. Mitovy ny tadin-dokanga, satria samy manana ny programa amin’ny fametrahana ny tany tan-dalàna ny roa tonta. Tafiditra indrindra amin’ny programan’asan’i Dada amin’ny alalan’ny sori-dalana, na ilay antsoina hoe “Manifesto” izany fametrahana ny tany tan-dalàna izany. Eo ihany koa ny fametrahana ny ady amin’ny tsy fandriam-pahalemana, ny fampivoarana ny toe-karem-pirenena, ny tontolo ambanivohitra, ary ny fametrahana ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana tena izy sy ny maro hafa tsy ho voatanisa. Noho izany indrindra, noho ny fitoviam-pijery no nanosika an’i Fanirisoa Ernaivo hanohana ny kandidà Marc Ravalomanana amin’ity fihodinana faharoa amin’ny fifidianana Filoham-pirenena ity. Marihina fa raha ny mahakasika an’i Fanirisoa Ernaivo manokana, olon’ny lalàna ny tenany, ary mitana ny andraikitry ny mpitsara. Efa nitana ny filohan’ny sendikan’ny mpitsara eto Madagasikara rahateo. Anisan’ny tena nahafantarana azy ny fahasahiany miteny mivantana tsy ampihambahamabana ary manapotsitra ny tsy mety amin’ny fomba fitantanan’ireo olom-panjakana ambony, sns. Ankoatra izay, nanambara i Fanirisoa Ernaivo fa hanangana ny Komity fisokafana izy sy ireo mpiara-dia aminy. Izany hoe, ity komity hatsangan-dramatoa Fanirisoa Ernaivo ity no handrindra ny fanohanana ny kandidà Marc Ravalomanana ankoatra ny antoko Tiako i Madagasikara (Tim) sy ny Komity manohana, na ny KMMR. MN Manohana azy ny antoko GJMD Manohana tsy misy fepetra an’i Marc Ravalomanana ny antoko GJMD, na ny “groupe des jeunes malagasy pour la démocratie”, araka ny nambaran’ ny filoha nasionaliny, sady mpitondra tenin’ny fanorolahy Rambeloson’Mino, fantatry ny rehetra amin’ ny hoe Zama. Ny GJMD izay antoko nitsangana efa ho folo taona lasa izay, ary mipariaka manerana ny distrika 71 amin’ ireo faritra 15. An’aliny ireo mpikambana anatin’ny antoko GJM, izay mifandray akaiky sy miara-mihosina amin’ ireo tantsaha manerana ny nosy. Tetikasa maro no hiarahan’izy ireo amin’ ny tantsaha, indrindra amin’ny fanatsarana ny vokatra. Taorian’ ny fanonganana an’i Ravalomanana Marc ny taona 2009, dia nahatsapa ireo tantsaha niaraka tamin’ny GJMD hoy Rambeloson’Mino, fa nitontongana sy ratsy ny lafin’ny famokarana rehefa tsy teo intsony i Marc Ravalomanana. Nanomboka teo dia tsy nisy niahy ny tantsaha hoy i Rambeloson’Mino na dia nisy aza ny fanjakana, ratsy tanteraka ny vokatra noho ny tsy fisian’ ny fanampiana tahaka ny fanomezana masomboly, fanafody hamonoana ny bibikely. Nitontongana hatrany amin’ ny 30 ka hatramin’ ny 40 %, ny vokatra tamin’izany hoy i Rambeloson’Mino. Narofy ny famokarana nanomboka teo, ary ireo tantsaha aza dia sahirana satria kely ny vola miditra ka tsy nahafana nanatsara intsony ny fambolena izay fiariany. Manginy fotsiny hoy ny filohan’ ny GJMD ny faharatsian’ ny lalana hamoahana ny vokatra, izay mbola vola hafa miala amin’ ireo tantsaha. Eo amin’ ny lafin’ny tsy fandriam-pahalemana dia any an-tsaha izao no matory ireo tantsaha, noho ny fisian’ ny fanafihan-dahalo. Manoloana ireo olana sedrain’ ny tantsaha ireo, dia nambaran’ ny filohan’ny GJMD Rambeloson’Mino, fa i Marc Ravalomanana ihany sisa no azon’izy ireo antenaina hamaha ny olana noho izy tantsaha mitovy amin’ izy ireo. Isan’ny efa nataon’ i Marc Ravalomanana mantsy hoy ny GJMD ny fananganana ny PSDR, izay tetikasa fanohanana ny fampandrosoana eny ambanivohitra, izay nanampy betsaka ireo tantsaha. Toraka izany ihany koa ny fampifaninanana ny tantsaha amin’ ny fandrindrana sy ny fampiasana ny famokarana manaraka ny fivoaran’ ny toetr’andro, izany rehetra izany izay nahazoana tombontsoa avokoa tamin’izany fotoana hoy hatrany ny GJMD. Voarakitra anatin’ny tetik’asan’ i Marc Ravalomanana ny fanatsarana ny sehatry ny fambolena, indrindra ny fampiroboroboana ny tantsaha. Noho izany dia izy no vahaolana hoy Rambeloson’Mino, indrindra ny lafin’ny fanamboaran-dalana, izay hantenaina hampakatra ny vokatra vokarin’ ireo tantsaha manerana an’i Madagasikara. Nilaza mazava ny GJMD fa tsy mihosina amin’ i Marc Ravalomanana izy ireo, fa kosa ny tombontsoan’ ny firenena no jerena, satria ny firenena mandroso dia manondrona ny ambim-bava, ary ampy tsara ny sakafo ao aminy. Vonona noho izany ny GJMD hoy Rambeloson’Mino, hanohana tsy misy fepetra an’i Marc Ravalomanana noho ireo antony maro ireo. Manantena ny mpifidy rehetra noho izany ny GJMD hijery ny kara-pifidianany eny amin’ ny fokontany, indrindra ireo izay tsy nifidy tamin’ ny faha-7 ny volana novambra teo hampandaniana an’i Marc Ravalomanana. Iratra Raitra L’article Fanirisoa Ernaivo : Hanohana ny kandidà Marc Ravalomanana est apparu en premier sur .L’article Fanirisoa Ernaivo : Hanohana ny kandidà Marc Ravalomanana a été récupéré chez Triatra.
Fikarohana – “Microcebus jonahi”: Karazam-barika kely vaovao
Saika isan-taona, ahitana karazam-barika na gidro vaovao eto Madagasikara vokatry ny fikarohana hitan’ireo ma­nampahaizana haivarika. Lo­hany amin’ny fikarohana ny profesora Ratsimbazafy Jonah ao amin’ny Gerp* miaraka amin’ny mpikaroka vahiny hafa. Ity volana jolay 2020 ity no nahafantarana fa misy varika kely vaovao hita sy fantatra vokatry ny fikarohana nandritra 10 taona mahery eo amin’ ireo mpikaroka haivarika iraisam-pirenena. Ao amin’ny valan-javaboahary Mananara Avaratra ny ahitana azy, “Mi­crocebus jonahi” (Microcebe de Jonah). Tafakatra 25 izao ny karazana Microcebe misy eto Madagasikara. Azo antoka fa mbola misy harena voajanahary miafina tsy fantatra, anatin’ny ala izay efa 10% sisa tavela izay ahitana karazana gidro 112. Vaovao tsara mampiray ny mpikaroka iraisam-pirenena ity varika kely vao hita ity. 14 izy ireo, avy amina firenena samihafa (i Etazonia, i Ale­mai­na, i Frantsa, i Portugal, ary i Madagasikara) nanoratra ny voka-pikarohana Vahaolana iray ny fahazoan’ny rehetra mampiasa angovo mora vidy, hampihena na hampitsahatra ny fahapotehan’ny ala. Antony iray mahasarika ny mpizahatany hitsidika an’i Madagasikara ny hijery varika amina faritra natoraly fonenany. Fanoitra iray lehibe ho an’ny toekarena eto ny fikajiana ny tontolo iainana.R.MathieuGerp* : Groupe d’étude et de recherche sur les primates de MadagascarFa maninona no hoe Microcebus jonahi ? Pr Ratsimbazafy Jonah, mpikaroka malagasy fantatr’izao tontolo izao amin’ny asa fikarohana sy ny fiarovana ny varika. Izy no mitantana ny Gerp eto Madagasikara. Noho izany asa vitany izany, niray feo ireo mpikaroka iraisam-pirenena nisafidy ny anaran’io varika kely io hitondra ny anarany. Izy rahateo ny avy aty Afrika voafidy voalohany ho filohan’ny International Primatological Society, mandritra ny efatra taona, raha toa ka ny Amerikanina sy ny Japoney hatrany ny nitarika izany teo aloha.L’article Fikarohana – “Microcebus jonahi”: Karazam-barika kely vaovao a été récupéré chez Newsmada.
Craam – Madagaslam: hiverina ny hetsika slam eny amin’ny Oniversite
Manomboka miverina tsikelikely ny hetsika ara-javakanto na mbola eo aza ny hamehana ara-pahasalamana mihatra eto Madagasikara. Hotanterahina etsy amin’ny Craam oniversiten’Antananarivo ny hetsika « Slam à l’U », handraisan’ny rehetra anjara. Hetsika anisan’ny fiaraha-miasan’ny fikambanana Madagaslam sy ny Craam ity atao, anio, 25 septambra 2020, manomboka amin’ny 2 ora tolakandro ity. Seho ara-kolontsaina efa fanao teo aloha, saingy noho ny hamehana dia nisy fiatoana izany ka izao manomboka miverina izao indray. Araka ny nambaran’ny mpikarakara dia tsy maintsy arahin’ny rehetra ny fitsipika ara-pahasalamana « geste barrières » ho an’ny mpanatrika mba hisorohana ny fihanaky ny valanaretina coronavirus eto Madagasikara.NarilalaL’article Craam – Madagaslam: hiverina ny hetsika slam eny amin’ny Oniversite a été récupéré chez Newsmada.
Tao amin’ny efitrano iray ambany rihana no nahitana ny fatin’ilay jeneraly, nihohoka sady nihosin-dra . Tahaka izany koa no nahitana an-dramatoa vadiny, tao an-dakozia. Ahina ho doro trano niniana natao no nahatonga ny fahamaizan’ny tranon’izy ireo, ao Antaniavo, afakomaly alina…Nitrangana haintrano tao amina tranona jeneraly iray efa misotro ronono monina ao Antaniavo Antsirabe, afakomaly alina tamin’ny 11 ora. Tonga teny an-toerana ny polisy avy ao amin’ny UIR nijery ny zava-misy sy nanavotra ilay jeneraly. Hita faty tao an’efitrano iray tao ambany rihana ilay jeneraly raha tany an-dakozia no nahitana ny fatin’ny vadiny, araka ny fampitam-baovao avy amin’ny fitaleavam-paritry ny polisim-pirenena (DSRP) Vakinankaratra. Tsy fantatra mazava ny antony nahatonga ny firehetana fa ny afo nijoalajoala nahazo ny trano iray manontolo no nahataitra ny olona teo amin’ny manodidina ary tapitra kila hotohoton’ny afo tsy nisy noraisina intsony ny trano manontolo. Ny loharanom-baovao hafa kosa anefa milaza fa izy mivady miaraka amin’ny tovolahy mpanampiny iray no mipetraka ao amin’ity trano ity. Nambaran’ilay mpanampiny fa any ambony rihan’ny trano izy no matory amin’ny alina ka naheno fipoahana mafy tao an-trano izy tamin’io fotoana io ary niaraka tamin’izay, nirehitra ny trano. Nijoalajoala ny afo ka ireo fokonolona teo an-toerana no nifanome tanana tamin’ny famonoana ny mialoha ny nahatongavan’ny kamiaoben’ny orinasa Smatep namono ny afo. Nisedra olana rahateo ny kamiaoben’ny mpamonjy voina ao Antsirabe ka tsy afa-nanao ny asam-pamonjena tamin’ity voina ity.Fanafihan-jiolahy narahina vonoan’olona…Efa tamin’ny 1 ora sy 25 mn vao voafehy ny afo, raha ny fanazavan’ny polisy. Nandritra ny fitsirihana nataon’ny polisy no nahitana fa hita faty nihidy tao an’efitrano fatoriany tao ambany rihana ilay jeneraly, nihohoka teo akaikin’ny farafara sady nihosin-dra. Ramatoa vadiny kosa hita faty nihosin-dra tao an-dakozia, tsy misy fitafiana intsony ny tapany ambany.Miteraka resabe ao Antsirabe hatrany anaty tambajotran-tserasera ny fahitana ity haintrano nahafatesana jeneraly mivady ity. Manahy ny rehetra fa fanafihan-jiolahy narahina vonoan’olona tsotra izao ity raharaha ity. Manaporofo izany rahateo ny nahitana ny vadin’ilay jeneraly mitanjaka ny tapany ambany. Hita tao an-dakozia ihany anefa ny akanjony. Rehefa vita kosa ny asa ratsin’ireo jiolahy vao mety nodoran-dry zalahy ny trano mba tsy hahafantarana ny marina rehetra. Ny valin’ny fanadihadiana ataon’ny polisy anefa no ahafantarana ny marina rehetra momba ity raharaha ity. Efa lasan’ny fianakaviany kosa ny fatin’izy mivady niharam-boina tao amin’ity trano ity.Jean ClaudeL’article Doro trano niniana natao? Jeneraly misotro ronono sy ny vadiny maty tao anaty haintrano a été récupéré chez Newsmada.
Fanafody fandrindram-piterahana: 20% ny vehivavy tsy afaka nisitraka izany
Nidina ho 32% ny tahan’ny fampiasana ny fanafody fandrindram-piterahana teo amin’ny vehivavy raha efa tafakatra 39% izany. Tsy tratra ny tanjona 50% ho an’ity taona 2020 ity noho ny valanaretina Coronavirus. Nisy fiantraikany tamin’ny fahazoan’ny vehivavy nanohy ny fanabeazany aizana ny fiparitahan’ny valanaretina Covid-19 maneran-tany sy teto amintsika manokana. Natahotra ny hivezivezy teny amin’ny tobim-pahasalamana na koa tsy afaka nivoaka noho ny fepetra ara-pahasalamana izy ireo. Nihena 20% ny andriambavilanitra nahazo tolotra ara-pananahana ary nitombo ny vohoka tsy niriana ho an’ny salan-taona 15 -19 taona, araka ny fanazavan’ny tompon’andraikitra voalohany ao amin’ny Marie Stopes Madagascar, Razafinirinasoa Lalaina, omaly nandritra ny fanamarihana ny Andro maneran-tany ho an’ny fandrindram-piterahana. Anisan’ny fanafody be mpisafidy ny « implanon » asisika eo amin’ny sandry ka nandritra ny volana jolay sy aogositra. Niato ny fahatongavan’ny tahiry satria nikatona ny seranam-piaramanidina. 20 000 isam-bolana teo ho eo ny tsy afaka nisitraka izany, efa niverina ny famatsiana ankehitriny. Laharam-pahamehana ho an’ny MSI, manomboka izao, ny fampiroboroboana ny fandrindram-piterahana sy fisorohana ny vohoka tsy niriana eo amin’ny zatovovavy. Efa niakatra ho 22% ny tahan’ny tanora mampiasa fanafody fandrindram-piterahana amin’ny vehivavy tokony hahazo ny tolotra, amin’izao fotoana izao. Nanampy betsaka ny MSI ny fahalanian’ny lalàna vaovao manome alalana ny tanora hahazo vaovao sy tolotra momba ny fandrindram-piterahana, ny taona 2019.12 taona mitondra vohoka voalohany Amin’ny tanàn-dehibe, mahazo vaovao sy ny torohevitra momba ny fiarovana amin’ny vohoka aloha loatra sy tsy iriana ny zatovovavy, any ambanivohitra sarotra ny fampitana ny fanentanana ary 12 taona ny fotoana voalohany hirosoan’ny ankizy amin’ny firaisana ara-nofo. Izay no nahatonga ny fanamarihana atao any amin’ny faritra AtsimoAtsinanana, distrikan’i Farafangana.Nanao antso ho an’ny fanjakana ny MSI tsy hanadino ny fanenkena efa nataony hanao laharam-pahamehana ny fandrindrana ny fiterahana mba hirindra ny fiakaran’ny harinkarena sy ny isan’ny zaza teraka.Vonjy A.L’article Fanafody fandrindram-piterahana: 20% ny vehivavy tsy afaka nisitraka izany a été récupéré chez Newsmada.